Doro trano, fandrobana, lakrimozena, tifi-danitra… : rotaka any Vangaindrano, mihatra ny « couvre feu » | NewsMada
Doro trano, fandrobana, lakrimozena, tifi-danitra… : rotaka any Vangaindrano, mihatra ny « couvre feu »
Nitranga ny nahina. Velona ny rotaka any Vangaindrano, hatry ny omaly tontolo. Raikitra ny doro trano. Toeram-pivarotana 14 no may kila. Misy ny fisamborana. Manararaotra ny mpandroba. Manao tifi-danitra sy manipy grenady lakrimozena ny mpitandro filaminana. Nampiharina any an-toerana ny “couvre feu”.
Niakatra tampoka ny hafanana tany Vangaindrano, omaly! Rotaka tany an-toerana, nirefodrefotra ny baomba mandatsa-dranomaso sy ny tifi-danitra. Raikitra ny tora-bato sy ny fandorana trano omaly. Trano 14 voalaza fa may, nahitana ireny kioska sy trano hazo fivarotana ireny. Nisy ihany koa ny tranobe ankoatra ireo. Ny fandrobana sy fanimbana fananan’olona, tsy ferana. Olona enina kosa voasambotra, araka ny vaovao avy any an-toerana ka ny telo tamin’ireo, mpanao fihetsiketsehana ary ny telo hafa mpanararaotra nangalatra.
Nitsefotra ilay fivoriana niarahan’ireo olobe sy ny tompon’andraiki-panjakana ary ny lehiben’ny zandary tany Vaingaindrano, afakomaly tontolo. Tsy nanaiky hatramin’ny farany ireo fokonolona ny tsy hanaovana fitsaram-bahoaka ireo voalaza fa namono ilay tovovavy mpianatra vao 19 taona.
Vao maraina, efa nanomboka nikononkonona nivorivory teo an-tampon-tanànan’i Vangaindrano ireo olona marobe. Nihodidina ny toby misy ny zandary izy ireo, ary nikasa hiditra hanao amboletra tao anatiny. Tamin’ny 10 ora maraina teo, omaly, niditra tao amin’ny tobin’ny zandary nikasa hamoaka ireo telo lahy voatana ao ireo olona marobe ka voatery nanapoaka grenady mandatsa-dranomaso ny zandary. Raikitra ny valy bontana tamin’ny tora-bato nataon’ireo vatan-dehilahy. Nihiakiaka ny handoro ny Jirama sy ny tanàna ihany koa ireo. Efa tsara ambina anefa ny Jirama ka tsy voadoron’ireo andian’olona. Tany amin’ny Bazaribe sy tany amin’ny toby fiantsonan’ny taksiborosy ny niantombohan’ny doro trano, ka ireo trano fivarotana sy kioska no tena lasibatra. Voalaza ihany koa fa may ny toeram-pivarotan’ny senatera HVM any an-toerana, Thu Jaune Horace Man, nodoran’ny olona ihany koa ny toby fametrahany entana. Nanararaotra ny mpandroba ary nisy telo ireo voasambotra.
Raha ny vaovao avy any an-toerana ihany, voalaza fa kaominina 14 no miaraka mirohotra manampy ny kaominina telo teo aloha satria kaominina miray Dina avokoa izy rehetra ireo. Mandresy lahatra ny sefo distrika fa tsy misy manaiky ny fokonolona. Hatramin’ny omaly, tsy misy mpitondra avy amin’ny fanjakana foibe mitondra vahaolana tonga any an-toerana.
“Couvre feu” nanomboka omaly
Nilaza ny « Directeur de la sécurité et des renseignements au commandement de la gendarmerie nationale », ny jly Rakotoarison Anthony, fa mihatra ny « couvre feu » nanomboka omaly any Vangaindrano. « Tsy maintsy ampiharina ny lalàna, ary samborina izay mandika lalàna. Mbola voatana ao amin’ny zandary avokoa ireo telo lahy takin’ny olona anaovana fitsaram-bahoaka, ary efa vita famotorana fa miandry ny fanolorana azy ireo ny fitsarana », hoy ny fanamafisany. Nanamafy koa ny Jly Ramiandrisoa Jean de Dieu Daniel, kaomandin’ny zandarimaria, fa tsy mihemotra amin’ny zava-misy ny zandary ary tsy hanaiky velively ny fanafihana tobin-jandary. “Tany tan-dalàna i Madagasikara”, hoy izy.
Hatramin’ny ora nanoratanay, milamindamin-dratsy ao Vangaindrano. Fantatra fa mbola miketrika ny hanohy ny hetsika ireo olona marobe any an-toerana. Efa vonombonona amin’izay mety hiseho ny mpitandro filaminana ary nanampy isa ihany koa. Tantara mitohy…